Tetikasa Vaovao An’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2019 19:38 GMT
Ry Vondrom-piarahamonina GV malala,
Mahafaly anay ny milaza ny fanombohana hetsika santatra iray vaovao an'ny Rising Voices, mikendry ny handrafitra metodolojia iray sy programam-pampianarana mikasika ny fiofanana ho mpisolovava nomerika. Ireo vehivavy mpitarika miasa ho fampiroboroboana ny firenena any Atsimo no hifantohan'ny sainay voalohany indrindra, saingy ny tanjonay dia ny hanangana zavatra izay mety ilaina any anatin'ireo sehatra hafa marobe. Efa an-taona maro no nitantananay ireo tetikasa fampiofanana amin'ny fisoloana vava sy amin'ny fahavitrihana, ary vintana iray ity ho anay hanamafisanay ny fianarana sy ireo fampiharanay.
Ity dingana voalohany amin'ny tetikasa ity no hamorona an'ireo fotokevitra savaravina ho an'ny fanofananay amin'ny fisoloana vava ara-nomerika, izay avy eo, mety ho azo ampiharina amin'ireo hevitra samihafa any amin'ireo firenena any Atsimo. Eo amin'ny sivy volana eo ho eo no ho faharetany. Ny New Venture Fund no hamatsy vola miaraka amin'ny fanohanan'ny Gates Foundation.
I Abir Ghattas (@abirghattas) no hitarika an'io tetikasa io. Mpanoratra ao anatin'ny GV i Abir no sady mpikatroka, mpiaro ny vehivavy, blaogera ary teknisianina manokana izay miara-miasa ihany koa amin'ny fikambanana Mideast Youth, mifantoka manokana amin'ny tetikasa Mideast Tunes. Marseille, Frantsa ary Beyrouth no andaniany ny androny.
Manantena izahay fa hahaliana ny vondrom-piarahamonina GV io tetikasa vaovao io ary izahay dia misaotra an'ireo olona rehetra izay nampiseho fahazotoana mba hiasa ao. Manantena izahay hamorona fahafahana marobe handraisana andraikitra sy handraisana anjara. Raha tahaka ny mahaliana ilay tetikasa, azafady mifandraisa amin'i Abir na i Eddie Avila. Mikaroha vaovao betsaka mikasika ny tetikasa amin'ireo herinandro hoavy, eo amin'ny blaogin'ny vondrom-piarahamonina ary miaraha aminay hiarahaba an'i Abir!
Mediam-bahoaka 10 Mey 2021
Mediam-bahoaka 03 Desambra 2019
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Novambra 2019